Falka Qandaraska / Minnesota.gov
Falka Qandaraska (marka iibsadahu lacagta wada bixiyo ama helo qaab uu ku bixiyo hadhaaga)
Macluumaadka dheeraadka ah
Xarunta Guri Lahaanshaha Minnesota
Falka Qandaraska Waxyaabaha Iibsadayaasha Guryaha iyo Iibiyayaashu u Baahanyihiin inay Ogaadaan si ay u Gaadhaan Natiijo Guul leh
Fahanka Falka Qandaraaska
tixgelinaysa Iibsiga Guri addoo Isticmaalaya Falka Qandaraska?
Kaalmada Sharciga bartamaha-Minnesota
Tilmaamaha lagu Kiraysto Si lo yeesho oo loo Iibsado Falka Qandaraaska
Ganacsigu halka waxay u joogtaa inay ku caawiso
Waaxda Ganacsiga Minnesota
Xarunta Adeegyada Macmuulka
weyn MN keliya: 800-657-3602
Miyuu qof adiga kuu soo jeedinayaa inuu kaa iibiyo guri qaab falka qandaraaska ah? Garo khataraha.
Falka qandaraaska ( wakhtiyada qaarkood loogu yeedho qanadaarska iibsiga haftada ah ama heshiiskaiibka haftada ah) waa kala iibsiga guryaha kaas oo iibka dhismaha uu maalgeliyo iibiyahu beddelka koox saddexaad sida baanka, ururka amaahda ama amaahiya daynsiga guriga. Inta badan waxaa loo isticmaalaa marka iibsadaha aanu u qalmin daynsiga guriga caadiga ah
Beddelka ku iibsiga guriga daynsi guri, iibsadahu waxa uu aqbalaa inuu toos u siiyo iibiyaha hafto bil kasta ah. Iibsadu waxa uu awoodaa inuu galo gurgia ka dib marka iibka la xidho, laakiin iibiyaha waxa uu haystaa xaqa cinwaanka lahaanta dhismaha. lahaanshaha dhabta ah waxay ku wareegtaa iibsadaha keliya ka dib marka lacag bixinta u dambaysa la bixiyo
Falka qandaraaska waxa uu in dheer ahaa ikhtiyaarka maalgelinta ee wax kala iibsiga guriyaha ee u dhaxeeya xubnaha qoysaska iyo saaxiibada. Qaar ka mid ah ururada guriyaynta aan macaash doonka ahayn sidoo kale waxay u isticmaalaan si loo caawiyo qoysaska dakhliga hoose inay dhabo u helaan lahaanshaha guryaha.
Laakiin bilowgii dhibaatooyinka dhaqaale ee 2008, qaar shirkadaha maalgelinta dhismaha guryaha ah waxay iibsadeen guryaha lala wareegay oo ka dib waxa ku siiyeen falka qandaraaska iibsadayaasha dhakhliga hoose leh ama kuwan leh dhibcaha hoose ee liidata oo aan iibsan karin maalgelinta daynsiga guryaha dhaqaneed.
Falka qandaraaska sidoo kale waa khiyaamo dooq u ah khiyaamoolayaasha dhismaha iyo iibinta guryaha kuwaas oo mid uun kuwaas oo ku dhibi doona mid ah dhisme dhexda guryo iibsadayaa guryo mustaqbalka ah ama ka ururiya lacag iibsayaasha marka kiraynta guriga lala oofin waayo daynsiga guriga lcagta aan la bixin.
Marka falka qandaraasku uu mar-marka qaarkood ka faa’iido iibsadaha oo aanay jirin jid kale oo guriga lagu mulkiyo, waa doorasho aad u halis badan oo keenta xad gudub iyo dhaqano bahalnimo ah. Sidoo kale waxaa ka maqan xuquuqaha macmiilka iyo dhowrisaha kale ee la heli karo ee waafaqsan sharciyada gobolka iyo federaalka ee guri iibsadayaasha leh dayniska guryaha dhaqanka ah. Haddii iibsadahu uu ku guul daraysto inuu lacagta bixiyo ama uu oofin waayo xaaladaha kale ee qandaraaska, iibiyahu waxa uu tirtiri karaa qandaraaska, caydhin karaa iibsadaha oo si degdeg ah dib ugu sheegan karaa dhismaha iyaddoonay jirin la’aanta dib ula wareega guriga iibka ama tallaabo garsooreed.
Falka qandaraasku waxa uu u muuqan karaa wax fudud oo toos ah, laakiin ikhtiyaarka maalgelinta waxay ku keeni kartaa tiro god daloolooyin ah iibsadaha guriga. iibsadayaal badan oo falkan qandaraska ah weligood ma noqdaan mulkiilayaasha buuxa ee dhismaha oo waxay waayaan dhammaan lacagta ay ku bixiyeen mulkiilanimda.
Ka hor saxeexida falka qandaraaska, iibsadayaasha guryaha mustaqbalku waa inay hubiyaan inay si buuxda u fahamaan ilaa xadka waajibaadyadooda hoosta qandaraaska, dhammaan kharashaad ay ka masuul ahaan doonaa iyo khataraha ay ku dhacayaan, ay ka mid yahay sida degdega ah ee ay guriga ku waayi karaan iyo dhammaan lacag bixinta ay sameeyeen.
Waxaad U baahantahay Inaad Ogaato
Halka waxaa ah ka fiirsashooyin muhiim ah oo ay tahay inaad ogaato ka hor inta aanad ku iibsan guriga falka qandaraaska.
Hubso inaad fahanto oo aad maarayn karto dhammaan kharashaadka aadka masuulka ahaan doonto. Ka sakow, lacag bixinta haftada bilaha ah ee iibsadaha, waxaad bixin doontaa caymiska mulkiilayaasha guryaha, cashuuraha dhismaha iyo kharashaadka hagaajinta iyo dayactirka sida lagu caddeeyay falka qandaraska. Badanka guryaha falka qandaraska waxaa loo iibiyaa “sida ay tahay” oo waxay u baahan karaan hagaajin wayn oo noqon kartaa masuuliyadaada. Iyaddoo ku xidhan shuruudaha qandaraaska, waad waayi kartaa guriga haddii aanad bixin hagaajinta .
Bixinta daynta hadhsanayd
Sida daynsiga guriga caadiga ah, falka qandaraska caadi ahaan waxay isku raaceen jadwalka qiimo iyo lacag bixin. Laakiin lacagta bixinta inta badan qadarka daynta lama dhimo muddo dheer, macnaheeduna yahay waxaa suuragal ahaan lagaaga baahan doonaa inaad bixiso qadar aad u badan oo “daynta hadhsanayd ah” taariikh gaar ah si loo dhamamaystiro ibka iyadda la daboolayo hadhaaga buuxa ee la bixinayo qiimaha iibka. Wakhtigaas, waxaad maangal ahaan u baahan doontaa inaad hesho daynsi guri wixii ah bixinta dayntii hadhsanayd. Haddii aanad u qalmi karin daynisga guriga ama haddii kale bixinta daynta hadhsanayd marka la filayo, waxaa dhici karta inaad la kullanto tirtirida qandaraaska iyo ka caydhinta guriga.
Tirtirka iyo ka caydhinta
Haddii aad seegto lacag bixin keliya, ama aanad samayn karin bixinta daynta hadhsanayd ama aanad dhammaystirin shuruuda kale oo falka qandaraaska ah, iibiyahu waxa uu tirtiri karaa qandaraaska oo waxa uu bilaabi karaa falka ka caydhinta guriga adiga kugu lidka ah gudaha 60 maalmood. Waxaaad waayi doontaa guriga iyo dhammaan lacagta aad hadda ka hor ku bixisay mulkilainimada ee
Daynsiga guriga iyo lahaanshaha dhismaha
Sababtoo ah iibiyahu waxa uu haystaa cinwaanka dhismaha muddada uu jiro qandaraasku, waxaad gelaysaa halista in iibiyahu uu ku xanibi karo dhismaha daynsiga guriga iyo lahaanshaha dhismaha. Haddii iibiyahu aanu bixin lacagta daynsiga guriga oo dhismaha uu ku dhaco in lala noqdo, waxaad waayi doontaa guriga.
Diiwaan gelinta falka qandaraaska
Gudaha affar bilood oo saxeexida falka qandaraaskan ah, waa inaad ka “diiwaangelisaa” xafiiska diiwaangeliyaha degmadda ama diiwaaniyaha cinwaanda ee degmadda halka hantidu ay ku taalo. Haddii aanad sidaas samayn, waa lagu ganaaxayaa. Diiwaangelinta qandaraasku waxay sidoo kale caawin doontaa caddaynta lahaanshahaaga dhismaha oo waxay kaa ilaalin doontaa caqabadaha qandaraaska ee uu saaray iibiyahu dhismaha.
Halkan waxaa ah tilmaamo muhiim ah haddii aad ka fekerayso iibsiga guriga leh falka qandaraaska.
Codsashada daynisga guriga caadiga ah
Halkii aad kaga boodi lahayd halista iibka iibiyuhu maalgeliyay, waa inaad marka kowaad isku daydaa inaad uqalanto amaahda daynsiga guriga caadiga ah ee bangiga, ururka amaahda ama amaahiya daynsiga guri ee ruqsada leh. Waxaa ku jiri doono dhowrista macmiilka oo dheeraad ah oo waxa dhici karta in ay qiime yar kugu tagto.
Tallo ka hel
Falka qandaraaska waa qaban qaabo adag oo leh khataro sharci iyo dhaqaale. La tasho qareenka ama la taliyaha guriyanta la ansixiyay markaas waxaad fahmi kartaa faa’iidooyinka iyo khasaarada falka qandaraska ee xaaladaada.
Hel qiimayn madax banaan iyo baadhitaan xirfad yaqaan
Qiimaynta waxay kuu sheegi doontaa inta uu yahay qiimaha dhismahu markaas lacag dheeraad ah ma bixin doontid. Baadhitaanku waxa uu kuu sheegi doonaa wax ku saabsan xaalada dhismaha iyo waxa hagaajinta ah ee loo baahanyahay. Sidoo kale la hubi xafiiska baadhida guriyaynta maxaliga ah wax ku saabsan wixii xad gudubyada summada laga warbixiyay ee u baahan hagaajinta.
Hubso inaad fahantahay qandaraaska iyo masuuliyadaha maaliyada
Dib u eeg lacag bixinta bilaha ah, cashuurta dhismaha, caymiska iyo shuruudaha dayactirka.samaynta aad aqbalayso. Waa maxay qimaha xiisaha leh ee aad bixinaysaa? Waa imisa bixinta daynta harsan oo goormaa la filayaa? Waa maxay shuruudaha ku hoos jira kaas oo iibiyahu uu tirtiri karo qandaraaska oo kaa caydhin karo guriga?
Cilmi baadhid ku samee cinwaanka dhismaha
Hubso in iibiyahu dhab ahaan uu leeyahay dhismaha. Waxaad halis u tahay waayida guriga iyo shay kasta oo aad bixisay haddii ay ahayd daynsi guri oo ay noqoto la noqosho guri. Ka hubi wakiika yar ama xafiiska dhismaha degmadda si aad u ogaato haddii uu jiro daynsi guri ama lahaansha kale oo dhismaha ah. Cinwaanka wakiilku waxa uu sidoo kale hubin karaa qandaraaska in si sax ah looga diiwaangeliyaha degmadda, sida sharcigu farayo. Tani waxay sidoo kale caddayn doontaa lahaanshahaaga dhismaha oo waxay kaa ilaalin doontaa caqabadaha qandaraaska ee uu saaray iibiyahu dhismaha.